News - Isbedelka Horumarineed ee Waxsoosaarka saxarka ee Shirkadeena
Shirkaddayadu waxay ku sii kordheysay warshadaha wax soo saarka wax lagu nadiifiyo qashinka muddo 6 sano ah, intii lagu jiray horumarka weyn ayaa la sameeyay. Gaar ahaan, alaabada baakadaha ku habboon ee deegaanka u habboon iyo miisaska la geyn karo ee bey'ada u habboon ayaa si ballaaran loo isticmaalay, laakiin weli waxaa jira xaddidaadyo badan oo xagga horumarinta ah ee soo saaraya saxarka saxarada ee shirkaddayada.
(1) In kasta oo badeecada wax soo saarta saxarka ay soo martay sanado badan, heerka isticmaalka suuqa ma ahan mid sareeya, mid ka mid ah sababaha muhiimka ah ayaa ah in qiimaha caaryada ay aad u badan tahay, soo saarayaasha qaar qaabeynta caaryada ayaa tixgelin doona sida loo sameeyo waxay leedahay kala duwanaansho wanaagsan, si loo kordhiyo heerka isticmaalka caaryada, hoos u dhig qiimaha. Tusaale ahaan, shaashadda sida caadiga ah loo isticmaalo ee dahaarka leh, Xagasha ilaaliyaha, baffle, iwm, maxaa yeelay tirada wax soo saarka, dufcad ballaaran, oo keentay adeegsiga sare ee caaryadan, ayaa si weyn u yareeya kharashkeeda, taas oo ay aad u yartahay tixgelinta shirkadaha Shiinaha. Sidaa darteed, naqshadeynta caaryada iyo diyaarinta waa jiheyn horumarineed oo muhiim ah. Sanadihii la soo dhaafay, shirkadeena waxay qorsheyneysaa inay si tartiib tartiib ah u geliso naqshadeynta iyo soo saarista caaryada. Waxaan rajeyneynaa sanadaha soo socda in aan gaarno wax soo saarkeena caaryada ah.
(2) Cilmi baaris aan ku filnayn oo ku saabsan diyaarinta slurry, waxay horseedi doontaa wax soo saarka alaabada balaastigga ah ee qashinka ah ma buuxin karto qaar ka mid ah guryaha jireed ee gaarka ah, sidaa darteed ma buuxin karto baahiyaha dhabta ah. Si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka, warshadeena waxay si toos ah u isticmaashaa saxarka asalka ah saxarka qoryaha, saxarka bamboo, saxarka sonkorta, kharashka badan ee ka dhasha. Sidaa darteed, shirkadeennu waxay xoojin doontaa cilmi-baarista iyo horumarinta alaabada wax soo saarka ee walxaha qashinka, iyo illaa xad, waxay kordhin doontaa dib-u-warshadaynta iyo isticmaalka sanaadiiqda waraaqaha qashinka, waraaqda qashinka iyo fiilooyinka kale ee sare, si loo gaaro dareenka dhabta ah ee ilaalinta deegaanka. .
(3) Qaabdhismeedka adag ee alaabada saxarka la isku qurxiyo ee loo isticmaalo wax soosaarka warshadaha, ma jirto daaweyn dambe oo wax ku ool ah, taasoo keenta dheeh aan sinnayn, fududahay in la libdho, timo lumis, hal qaab iyo ifafaalo kale oo warshad soo saarta saxarka alaabooyinka, taas oo si ba'an u saameysa codsigeeda. Waxaa la rajeynayaa in xaalada lagu sii wanaajin karo iyadoo lagu daro geedi socodka daaweynta kadib ee wax ku oolka ah mustaqbalka, si markaa si aad ah looga dhigo codsigiisa.
(4) Waqtigaan la joogo, badeecooyinka wax ku duubaya saxarka way adagtahay in loo isticmaalo barkinta alaabada baaxada weyn leh, sida qaboojiyaha, qaboojiyeyaasha iyo qalabka kale ee culus ee guryaha. Sida loo hagaajiyo awooddeeda farsamo iyada oo loo marayo cabirista cabbirka, hagaajinta qalabka, naqshadeynta caaryada iyo isku dhafka aaladaha kale ee ilaalinta deegaanka si loo daboolo baahiyaha alaabooyinka waaweyn, taas oo sidoo kale ah jihada muhiimka ah ee horumarinta qalabka waraaqaha-caagga ah.
Khaanadaha Baako Baako Baako Baako, Dheehista Duubista Saxarka Haya, Dhammaan Noocyada Kala Dheehista Duubista Mashiinka Xannibaadda, Shaybaarka Saxarka Dyed, Sanduuqa Baakadaha Cuntada Degdega ah, Sanduuqa Baakadaha Cuntada,